05149711 Dynamic Seal Assembly Repair Kit For KMT Waterjet Spare Parts - Foshan HaiRan Waterjet Cutting Technologies Co. , Ltd
နေအိမ် » ထုတ်ကုန် » 05149711 Dynamic Seal Assembly Repair Kit For KMT Waterjet Spare Parts
မူလနေရာ Foshan, တရုတ် Control system CNC
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် HaiRan MOQ 1 အစုံ
အခြေအနေ အသစ် အတိုင်းအတာ(L ကို * W * H ကို) Standard
အဓိကရောင်းဝယ်ရေး High-accuracy After-sales Service အွန်လိုင်းအထောက်အပံ့
Payment Method T / T, L / C, Paypal, အကြွေးဝယ်ကဒ်, ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) 0.1ကီလိုဂရမ်
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း DHL, FedEx, UPS, TNT လျှောက်လွှာ Waterjet spare parts
နာမည် Dynamic Seal Assembly Repair Kit for KMT
Applicable industries ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များ, စက်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များ, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ, Construction Works
Standard အရွယ်အစား, weight
Dynamic Seal Assembly Repair Kit is applied to waterjet intensifier pump, with good sealing performance, မြင့်မားသောဖိအား,wear resistance.it helps maximize life and improves value
3.HaiRan introduce many advanced CNC equipment inside and outside China,our company has fist-class technical worker,နည်းပညာအင်ဂျင်နီယာများနှင့်အလွန်ကောင်းသောအရောင်းရဆုံးအဖွဲ့.
ထုပ်ပိုး & တင်ပို့:
1) အပိုပစ္စည်းများသည်, ကျနော်တို့ Foam စာရွက်ကဲ့သို့ပျော့ပစ္စည်းနှင့်အတူထုပ်ပိုး, dubble စာရွက်, နှင့်စက်မှုထုပ်ပိုး, လိုအပ်ပါကတစ်ခုတည်းသောသေတ္တာနှင့်သစ်သားသေတ္တာသည်အစိတ်အပိုင်းအထုပ်ပေါ်မူတည်သည်.
2) ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်စံတင်ပို့သည့်အထပ်သားသေတ္တာကိုပေးပါမည်, Intensifier လိုပဲ, shock attenuator နှင့်စုဆောင်းခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်.
1. မေး: Can I have some information about your scope of business?
က: T / T, VISA, Online Bank Payment, Pay Later，ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ
က: Transported by UPS, FedEx, DHL
က: Manufactory. We are specialized in waterjet parts for many years already. And we have large warehouse and quality control department for providing products for clients.
11.မေး: Do you have stock?
က: Most of products are under regular production, we can make delivery immediately if we have the specific one in stock.